“मन्त्री हुन पाए ‘ना’ङ्गो’ हुन र ‘गु’ खान पनि तयार हुन देखिए नेपाली नेताहरु” ! – Halkhabar kura
७ श्रावण २०७८, बिहीबार १३:३५
“मन्त्री हुन पाए ‘ना’ङ्गो’ हुन र ‘गु’ खान पनि तयार हुन देखिए नेपाली नेताहरु” !
म बाङ्लादेश जाँदा त्याहाँका मेरा मित्रहरू मलाई भन्ने गर्थे, “कस्तो नराम्रो सङ्ग कुहियो लोकतन्त्र ।” मलाई कसरी मानिस राजनीतिमा कुहिन्छ भन्ने तेती आभाष हुँदैनथ्यो। मलाई लाग्थ्यो, मेरो देशमा त्यसबेला पाजेरो , सुरासुन्दरी काण्ड…… भन्दा बढी त राजनीतिमा कुहिने के होला र , म मेरा बंगाली साथीहरूका कुरा बढाइचढाइ होलान जस्तो ठान्थें । म आज देख्दै छु, “राजनीतिको कुहिने हद हुदो रहेनछ।”
२. यस राजनीतिमा केही प्रवृत्तिहरु छ्न, जो निकृष्ट स्वार्थबाट सिर्जना भएका छ्न । एकथरीको प्रवृत्ति हो, खाने, बस्ने, लाउने जे जति छन सबै राज्यबाट लुट। आफ्नो परिवार, नाता आउरेभाउरे सबैलाई राज्यको लुटबाट पोश । यी किर्ना जस्ता नेता कार्यकर्ता कहिले यो पार्टीमा कहिले अर्को पार्टीमा, कहिले यो गुट र कहिले त्यो गुटमा दौड्दछ्न ।
यिनिहरुको प्रवृत्ति सुंगुरको जस्तो हुन्छ, जो आफ्नै बस्नेरसुत्ने ठाउँमा हग्छ, र त्यही थुतुनो जोतेर माटो खन्छ । यी दरीद्रलाई आफैँदेखि लाज लाग्नु पर्ने हो, तर लाजको त कुरा छोडौँ यी मन्त्री हुन पाए ‘ना’ङ्गो’ हुन र ‘गु’ खान तयार हुन्छ्न । यो दुई महिनामा कति देखिए यस्ता।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा संग्रौलाको फेसबुकबाट
Next खाडीको कथा र इजरायलको ब्यथा !
कसैको मृत्युु-पिडालाई तमाशा बनाएर पैसा कमाउन पल्लेका युट्युबरका भिडियो हेरेर अपराध नगरौँ !
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १४:१८